Seranam-piaramanidina any Dubai: nidina 2.2% ny mpandeha tamin'ny telovolana voalohany 2019
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Seranam-piaramanidina any Dubai: nidina 2.2% ny mpandeha tamin'ny telovolana voalohany 2019
Dubai International (DXB) dia nandray ny mpandeha 22.2 tapitrisa tamin'ny telovolana voalohany 2019, nidina 2.2 isan-jato io vanim-potoana io tamin'ny taon-dasa noho ny fihenan'ny sidina sy ny fiovan'ny fotoana fialantsasatry ny paska.
Ny habetsahan'ny kargo dia nitombo 4.1 isan-jato tamin'ny vanim-potoana mitovy ka nahatratra 641,250 taonina. Mpanjifa 22,230,810 no notompoina nandritra ny telovolana voalohany tamin'ny 2019 (-2.2 isan-jato). Ny salan'isa isam-bolana 7.41 tapitrisa isam-bolana dia ambany kely noho ny isam-bolana isam-bolana 7.42 tapitrisa voarakitra tamin'ny taona 2018. Ny fitaterana entana dia 641,250 taonina ny zotram-piaramanidina notontosaina tao amin'ny Dubai International (DXB) nandritra ny telo volana voalohany tamin'ny 2019 ka hatramin'ny 4.1%. Mikasika ny sidina dia ny totalin'ny sidina mpandeha nandritra ny telo volana voalohany tamin'ny 2019 dia nahatratra 95,857 3, nidina 737% tamin'ny taona lasa tamin'ny ampahany noho ny fiorenan'ny fiaramanidina 13 Max manan-kery nanomboka ny XNUMX martsa tao UAE.
Mikasika ireo toerana avo indrindra, India dia nanohy nitazona ny toerany amin'ny maha-firenena itodihan'ny DXB isa betsaka amin'ny isa mpandeha, miaraka amin'ny fivezivezena ny ampahefatra mahatratra 3,121,809 - ny ankamaroan'ny toerana itodihana any an-tampon-tanàna Mumbai, Delhi ary Cochin. Arabia Saodita no laharana faharoa tamin'ny lisitra nisy mpanjifa 1,745,750 1,511,917 1,159,722, narahin'ny Fanjakana anglisy niaraka tamin'ny mpanjifa miisa 764,489. Ny firenena marihina dia misy an'i Pakistan (mpanjifa 690,062 620,013), Etazonia (mpanjifa 414,445), Alemana (mpanjifa 871,180), Sina (624,442) ary Russia (605,628). Ny tanàna telo voalohany dia London (3.8 mpanjifa), Mumbai (2.7) ary Jeddah (mpanjifa XNUMX). GCC no faritra nitombo haingana indrindra tamin'ny fitomboana XNUMX%, narahin'i Amerika Avaratra niaraka tamin'ny fitomboana XNUMX%.
Nihena ny fotoana fiandrasana 30% tamin'ny Q1 2019, noho ny ivon-toerana mandroso DXB izay mampiasa fampahalalana tena izy hanatsarana ny serivisy sy ny fahombiazany, ary koa ny vavahady marani-tsaina manampy ny hafainganam-pandeha amin'ny fifindra-monina. Mikasika ny habetsahan'ny entana: Kitapo 13.3 tapitrisa (-0.9%) no nandalo ny rafitry ny valin'ny seranam-piaramanidina 175 km nandritra ny telovolana voalohany tamin'ny taona.